‘Zanakavavin’ny Ala’, Fanadihadiana iray Momba ny Fampizakana Tena ireo Vehivavy Tanora Any Ambanivohitr’i Paragoay · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Gabriela García Calderón, Mary Aviles Nandika (fr) i Amadou Lamine Badji, miora
Voadika ny 17 Marsa 2017 5:09 GMT
Diavolana ao amin'ny tahirin-javaboarin'ny alan'i Mbaracayú. Sary tao amin'ny Flickr an'i Jose A. Huertas (CC BY-NC-ND 2.0).
Faritra lavitra ao Paragoay no misy ny alan'i Mbaracayú, ahitàna dobo kely amin'ny faritra ambonin'ny renirano Jejuí sy ny tahirin-javaboarin'ny alan'i Mbaracayú. Ilay toerana, hozatry ny fifangaroan'ny zavamiaina, dia toerana masina ho an'ireo karazana vitsivitsy efa tandindonin-doza.
Fa ho an'ireo olona miaina eny amin'ny manodidina ny faritra, sarotra ny fiainana andavanandro. Ny fandehanana an-tsekoly, ohatra, dia tsy mora, tsy vitan'ny hoe tsy maintsy mamakivaky zavamaniry matevina mamefy ny làlana ireo ankizy rehefa ho any, fa koa noho ny zavamisy, tsy fahampian'ny fitaovana handrantoana fahalalàna sy ireo fitsaratsaram-poana atao amin'n vehivavy eny anivon'ny fiarahamonina.
Tamin'ny 2008, ny Fikambanana Moises Bertoni, sampana miadidy ilay tahirin-javaboary, dia nametraka ny Foibem-Panabeazana tao Mbaracayú, hetsika iray ikendrena ny hanomezana fanabeazana tsara kalitao ho an'ireo ankizivavy mipetraka ao anatiny sy manodidina ilay tahirin-javaboary. Manome maripahaizana teknika momba ny siansan'ny tontolo iainana izy io aorian'ny fianarana ambaratonga faharoa.
Ireny no nifantohan'ilay sarimihetsika tamin'ny 2015 “Zanakavavin'ny Ala,” notontosain'i Samantha Grant avy any San Francisco, Kalifornia. Haseho mandritry ny Fetibe Isantaonan'ireo Sarimihetsika Fanadihadiana, andiany faha-10 hatao ao Sébastopol ny 23 hatramin'ny 27 Mars io fanadihadiana io.